Sida loo isticmaalo Spotify Sida bilaabayso
Spotify waa sida goob caan ah oo maalmahan. Waxay bixisaa adeeg geeyo of music kala duwan ka dhisan warshadaha sida Warner Music Group, EMI, Universal iyo Sony. Tan iyo markii ay rimidda ee 2008, music goobta internetka soo ururiyey in ka badan 20 milyan oo isticmaala, 25% ka mid ah kuwaas oo bixiya bil kasta Times ay. Just sanadkii la soo dhaafay, Spotify sii daayay ay version mobile waa ay Gordhaw Kadhoofaan, Android, Blackberry, phone Windows iyo nidaamyada kale ee ka hawlgala heli karaa sidoo kale.
Boggan waxaa Gaarna u hibeeyeen ilaa ay music saamaxaya kuwa isticmaala inay dhirtuba ay playlist, album, artist, sifayn ama record label. Waxay sidoo kale ka dhigi kartaa baaritaan si toos ah marka aad leedahay xisaab shakhsi qotomisay. Haddii aad rabto in aad offline geeyo ah, inaad si fiican u heli version Premium kuu ogolaanaya inaad si ay u dhagaystaan ​​oo ka raadin xitaa aan internet-ka.
Qeybta 1: Abuuridda xisaab / Saxiix
Qeybta 2: Download iyo rakib Spotify on your computer
Qeybta 3: Sida loo Cusboonaysii Spotify Account
Qeybta 4: TunesGo - download Spotify free - Spotify ka dhigi doonaa sida aad isha music shakhsi
Si aad u raaxaysan adeegyada Spotify, aad leedahay si ay u abuuraan xisaab adiga ku gaar ah. Ha ka walwalin sababtoo ah waxaa jira fursad u ah inay la soo wareegto ilaa iyo xisaab ah oo lacag la'aan ah. All inaad samayso waa nooca Spotify.com in URL ah.
Marka aad ku jirtid bogga, waxaad arki doontaa link ah ayaa sheegay in Log In. By riixaya link ah, waxaa lagu siin doonaa fursad u gasho in la Facebook aad. Waa inaad u siin username iyo password aad account Facebook, iyo Spotify si toos ah isku xiri doontaa in aad Facebook si ay u abuuraan aad xisaabta ku Spotify. Haddii aadan rabin in la isticmaalo aad xisaabta Facebook u Spotify, kaliya dooran Sign Up ah ikhtiyaarka ugu hooseysa. Marka aad guji this, Spotify weydiin doonaa username aad la doonayo iyo password, iyo sidoo kale cinwaanka emailkaaga iyo password. Mar kasta oo aad soo gasho on Spotify, waxaad u baahan doontaa in ay galaan cinwaanka email iyo password aad. Sidoo kale waa iyada oo email in aad wargelinta ka Spotify heli doontaa.
Ka dib markii la abuurayo aad xisaabta, wax soo socda aad jeclaan doonaa si loo sameeyo waa loo rakibi software Spotify ee aad PC ama mobile. Waxaa fudud noqon doonaa si ay u helaan xisaabtaada Spotify haddii aad leedahay software ah ku rakiban. Haddii kale, waxaad u baahan doontaa in Spotify furo badan oo mar kale iyada oo loo siiyaa biraawsarkaaga. Plus, ma heli doonaan in ay la kulmaan dhamaystiran Spotify biimayn by idmo gasho iyada oo browser.
Sidaas halkan waa wax aad u baahan tahay in la sameeyo si loo soo dajiyo Spotify. Waa mid aad u fudud, sababtoo ah marka aad tagto goobta Spotify ah, waxa hadda ka jira doorasho ah waxaa si aad u dejisan software ah. Qeybta hoose ee bogga, waxaad arki doontaa labo doorasho, sidoo kale in ay soo bixi Spotify lacag la'aan ah ama Isku day Premium. Haddii aadan rabin in lagu bixiyo biilasha adeeggan, kaliya aad u riixi kartaa bilaash.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad diyaar u ah inay bixiso saddex doolar oo ah adeegidda laga Spotify badan oo horumarsan yihiin, waxaad riixi kartaa Isku day Premium. Waxa ugu wanaagsan hadda waa in version Premium waa u bilaash ka soddon maalmood ee ugu horreeya ee aad wajigeeda. Spotify doonayo in aad qaadato in edition Premium si aad yeelan doontaa fikradda ah faa'iidooyinka aad ka heli doontaa iyada oo version this. By this isku dayaya, waxaad samayn kartaa go'aan fiican.
Marka file rakibo, ee file '.exe' si buuxda lagala soo bixi, oo kaliya ay tahay in aad Orod faylka. Bar horumarka A muuqan doonaa, oo kaliya aad qabto in uu ka jawaabo qaar ka mid ah Haa-No su'aalo si aad u astaysto rakibo. Mar walba oo uu sameeyo, launcher Spotify muuqan doonaa, oo icon Spotify ee uu si toos ah u abuureen aad desktop.
Marka aad hore u leedahay xisaabta, aadan rabin inay ku xayiran leh music isku mid ah iyo playlist kaani oo kale mar. Taasi waa sababta Spotify uu idin siinayo fursad u cusboonaysiiso xisaabta. Sidee waxaad samayn doontaan wax? Waa hagaag, ha iska dhacdo.
Haa, kaliya aad u sugto update ah in ay ka dhacaan. Waxa ugu weyn ee ku saabsan Spotify waa in aysan rabin in account in la tagay by isbedelka cusub u bilaabay. Waxa aynu uga jeednaa waa, mar abuurtaan aad ciyaaryahan Spotify aad, oo waxaa jira version cusub, software u cusbooneysiin doonaa ahaantiisa. Haa, uma baahnid inaad qaado wax tallaabo ah sida wax ka qabashada fariimaha pop-up leh waxaa jira version cusub. Haddii aad rabto in aad update ah, riix tan ama taas. No! Spotify uusan aad u baahan tahay si ay u riix badhanka Update oo cayn kasta oo qaar ka mid ah. All inaad samayso waa abuurtaan software Spotify iyo la kulmaan fiirin cusub, isbedelka iyo horumarka in version cusub bixiya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kuwa qabaa updates si toos ah ma aha kuwa wanaagsan. Waxay dareemayaan in isbedel la waa in marka hore la bixiyay iyo haddii user ee doonayso inaad cusboonaysiiso uu Spotify, markaas isagu ha u go'aansan inuu nafsaddiisa. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka isticmaala, kuwaas oo, looma baahna inaad ka welwelin. The hal Spotify ma tweak qaababka aad u badan. Isbedelada laguma yeelan doono wax saameyn la taaban karo oo ku saabsan khibradaada.
Runta waxa ay tahay in macaamiishu ugu mar walba dooneysaa si aad u hesho nooca ugu dambeeya isla markiiba. Haddii aad maqashaan version cusub, laakiin Spotify uusan u cusbooneysiin si toos ah, waa inaad fahantaa in updates si toos ah waxaa lagu sameeyey si tartiib tartiib ah, si aanay u saamayn server aad u badan. Hadda, haddii aad ugu baahan tahay inay hesho warbixintii ugu danbaysay, kaliya toos ah u tag bogga download ka dibna dib ugu barnaamijka oo dhan Spotify. Ha welwelin ku saabsan helitaanka goobaha hore tirtirayaa. Haddii aadan uninstall aad hadda jira software Spotify ka hor inta aadan soo dajiyo version updated, markaas goobaha ay tahay in la sii hayo.
Haddii aad doonayso inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga, guji kaliya on your username ee qaybta kore ee midigta ah launcher Spotify ah. Ka dooro 'Account "ka fursadaha dropdown iyo aad lagu hagaajin doonaa goobta Spotify internetka, gaar ahaan on tab ee Guudmarka. Dooro tab Profile ah, oo aad macluumaad u cusbooneysiin karaa. Waxa kale oo aad u cusbooneysiin karaa xaaladda Times habka aad, Payment iyo rasiidhada aad matalaya aad iibsadaan hoos tab Times u arkaan. Haddii aad si qalad ah la tirtiro playlist ah, waxaad tagi kartaa tab uu soo kabsan playlist in ay dib u helaan. Waxa kale oo aad ka saari karto oo aad offline Devices oo ag maraya in ay tab offline Devices.
Qeybta 4: TunesGo - download Spotify free - dhigi Spotify sida il music shakhsi
> Resource > Spotify > Spotify Guide bilowga ah